Privatejetcharterflightservice.com a raara nye huu mma njem nke anyị na ndị ahịa site na-arụ ọrụ naanị na ugbo elu na rụọ ndị na-na nnabata ya na FAA ụkpụrụ maara dị nnọọ Part 135. The nnọọ Part 135 asambodo e kere ka-enye a ọkọlọtọ n'ihi na ugbo elu nchekwa, arụmọrụ, mmezi, ụkpụrụ na ikikere.
Na mgbakwunye na ụkpụrụ setịpụrụ nnọọ Part 135, Privatejetcharterflightservice.com eguzobewo ọbụna stricter nchekwa ibiere site na-achọ a-atọ ndị ọzọ nchekwa oditi niile kwụrụ ụgwọ flights. Nke a-atọ ndị ọzọ nchekwa oditi, ekenịmde TripCHEQ, ga-enye ihe mmesi obi ike na onye ọ bụla na ihe ọ bụla kwụrụ ụgwọ ụgbọ elu na-ekenịmde ke kasị dịrị nchebe na o kwere omume n'ụzọ.
Your Safety bụ anyị ụzọ:
Privatejetcharterflightservice.com ewe mpako na anyị nwere ike inye ndị ọzọ nchekwa kpọmkwem ka ọ bụla ụgbọ elu. Wyvern na Aviation Research Group (ARG / US) na-na-eduga-atọ ndị ọzọ, nọọrọ onwe ha na nchekwa auditors onye ọkachamara na-eduzi na-na saịtị ugbo elu mmezi na verifying arụ ọrụ ahụmahụ chọrọ.
ARG / US azụlitewo na TripCHEQ mmemme, nke na-enye ihe ọmụma dị mkpa metụtara ụgbọ elu gị. TripCHEQ edekọta ozi na ugbo elu rụọ nyochasiri ha na a ụgbọ elu-site-elu ndabere.
All anyị rụọ ga-ARG / US Gold, Gold + ma ọ bụ Platinum gosiri. Ọzọkwa, ha ụgbọelu ga-mesịa ma gbaara. ARG / US TripCHEQ bụ nke bara uru ikuku irenti ahịa n'ihi na ọ na-enye onwe ha, ebinyeghị akụkụ ọ bụla obi ike na ụgbọelu na-akwọ ụgbọ-ahọrọ maka ha n'akwụkwọ iwu ụgbọ elu ga-erube isi agbasosi nchekwa ụkpụrụ na onwe ugboelu ụlọ ọrụ.